Fiteny espaniôla - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Espaniola)
Ny fiteny espaniôla, na koa fiteny kastilianina, dia fiteny iray ao Eoropa. Io fiteny io dia ao amin’ny vondrona rômana, ao amin'ny fianakaviam-piteny indô-eorôpeanina. Miaraka amin’ny fiteny frantsay sy italianina ary pôrtogey, io fiteny io no anisan’ny fiteny nisampana avy amin'ny fiteny latina, fiteny taloha nampiasaina manerana an’i Eoropa sy i Azia Andrefana amin'ny fifandraisana.
Ny fiteny espaniola dia avy amin’ny fiteny latina, ary niavaka tamin’ilay fiteny latina ny fiteny espaniola taloha nanomboka tamin’ny taonjato faha-9, noho ny havitsian’ny fifandraisana tamin’ny taona afovoany. Ao amin’ny faritra afovoan’i Espaina no niavian’ny fiteny kastilianina ankehitriny. Ary tsy io irery no fiteny notenenina ao amin’ny Saikanosy Iberika nanomboka tamin’ny fisarahany tamin’ny fiteny latina hatramin’izao fotoana izao: ao ny fiteny pôrtogey, izay tenenina any Pôrtogaly ary any Brazila, ao ny fiteny katalàna, izay tenenina any Katalonia, manan-drenivohitra an'i Barselona, ao ny fiteny eoskarata izay tenenina any amin’ny farany andrefan’ny Pirenea, ao koa ny fiteny galisiana izay anisan’ny fiteny niavian’ny fiteny pôrtogey any Galisia.
Ankehitriny ny fiteny espaniola dia anisan’ny teny ofisialin’ny Firenena Mikambana miaraka amin’ny fiteny frantsay, anglisy, sinoa ary rosiana. Any ivelan’i Espaina, io no teny ofisialin’ireo firenena ao Amerika Afovoany ary amin’ny faritra andrefan’i Amerika Atsimo. Ny isan’ny mpiteny espaniola manerana izao tontolo izao, raha isaina ireo olona mianatra azy fa tsy nobeazina tamin’ny ilay fiteny dia eo amin’ny 600 tapitrisa eo ho eo no isan’ireo olona mahazo azy na miteny azy.
Ny fiteny espaniola dia fiteny rômana, izany hoe fiteny avy amin’ny fiteny latina fampiasan’ny vahoaka (latina: sermo vulgaris latinus) tamin’ny taonan’ny Fanjakambe rômana. Ny fiteny latina fampiasan’ny daholobe dia somary samihafa amin’ny fiteny latina an-tsoratra noho izy moramora kokoa.
Ny fiteny espaniola taloha izany dia avy amin’io fiteny fampiasan’ny vahoaka io, ary nanomboka niavaka tamin’ny fiteny latina nanomboka tamin’ny taonjato faha-8 sy ny taonjato faha-9. Tsy io irery no fiteny vokatr’ilay fiavahana, fa efatra, dia ny fiteny kastilianina (fiteny espaniola ofisialy ankehitriny), ny fiteny katalàna (any atsinanan’ny Pirenea), ny fiteny aragoney izay eo amin’ny faritra misy an’i Zaragoza ankehitriny, ny fiteny leoney (ao amin’ny faritra afovoan’i Kantabrika), sy ny fiteny galisianina (any amin’ny faritra avaratra andrefan’ny Saikanosy Iberika, niteraka ny fiteny pôrtogey taty aoriana).
Ireo fiteny avy amin’ny fiteny latina fampiasan’ny vahoaka ireo dia nipoitra tao amin’ny faritra avaratr’i Espaina ankehitriny. Ny faritra afovoany ary ny faritra atsimon’i Espaina tamin’izany fotoana izany dia nozanahan’ireo Maoro, mponina mozilmana tonga avy any Afrika Avaratra tao Espaina, ary ny fiteny nampiasaina tao amin’ny faritra mozilmana tao Espaina tamin’izany fotoana izany dia ny fiteny mozarabo, fiteny avy amin’ny fiteny latina ihany koa fa be voambolana avy amin’ny fiteny arabo ary soratana amin’ny alalan’ny abidy arabo. Tsy misy intsony ny mpiteny mozarabo ankehitriny ao Espaina ao.
Nandritra ny Reconquista espaniola ary noho ny "toerana malalaka" navelan’ireo mpiteny mozarabo sy ny fiteny arabo tao amin’ny faritra atsimo sy afovoan’i Espaina, dia nandroso nianatsimo ireo fiteny latina an’ireo mponina kristianina izay tany amin’ny farany avaratr’i Espaina: Naka ny toerany ankehitriny ny fiteny kastilana, katalana, aragoney ary galisiana (fiteny niavian’ny fiteny pôrtogey). Nandritra ny taon-jato faha-14 hatramin’izao fotoana izao, mihamitombo ny tsindrin’ny fiteny kastilianina amin’ny fiteny hafa, afa-tsy ao Pôrtogaly, nivadika ho Fanjakana mizaka-tena tamin’ny taonjato faha-10.
Nandritra ny taonjato faha-16 hatramin’ny taonjato faha-18, noho ny fahitan-dehibe sy ny fanjanahana an’i Amerika Latina ankehitriny, dia lasa fiteny fampiasa any ampitan-dranomasina ny fiteny kastilianina. Ary izay no tena nahatonga azy ho anisan’ny fiteny fampiasa indrindra any Amerika ary manerana izao tontolo izao ary anisan’ny teny ofisialin’ny Firenena Mikambana.
Antsoina hoe fiteny kastilianina taloha ny fiteny kastilianina nialoha ny taonjato faha-15; aorian’izany, fiteny espaniola tsotra izao no fiantsoana ilay fiteny, na fiteny kastilianina ankehitriny. Mifanakaiky ireo endrika ireo ary ny fampiasana ny renifeo fotsiny no mahasamihafa azy ireo, satria betsaka ny fiovana natao mahakasika ny renifeo tamin’ny taonjato faha-15.
Ny fiteny espaniola dia fiteny misimisy fitovizana amin’ny fiteny frantsay sy ny fiteny italianina, noho izy ireo avy amina fiteny iray. Sarotra ny fifankahazoana rehefa Espaniola sy Frantsay no miresaka, noho ny lalam-pivoarana tsy mitovy, an-tsoratra izy ireo no mety mifankahazo noho ny fiteny frantsay nitazona ny tsipeliny somary "antitra"; manakaiky ny fiteny italianina ny fiteny espaniola, na am-bava na an-tsoratra, ary mety mifankahazo ny mpiteny italianina sy ny mpiteny espaniola. Misy koa ny fifankahazoana amin’ireo mpiteny portogey, an-tsoratra sy am-bava, na dia sarotsarotra kokoa aza izany.
Mitazona ny fivoarana entin’ny fiteny latina fampiasan’ny vahoaka ny fiteny espaniola, izany hoe tsy fisian’ireo endrika araka anjara asa, tsy fisian’ny halavan-janapeo, ary tsy fisian’ireo matoanteny tsy amin'ny fiendrika mañano.
Fivadihan'ireo zanapeo fohy manan-tsindrimpeo ho zanapeo sosona (ĕ → ie ; ŏ → ue).
Ny voambolan’ny fiteny espaniola dia avy amin’ny fiteny latina. Noho ny fanjanahantany arabo nandritry ny arivotaona iray manontolo anefa dia betsaka ireo voambolana avy amin’ny fiteny arabo (teny nindramina maherin'ny 4 000).
Tahaka ireo fiteny rômana avy amin’ny fiteny latina fampiasan’ny vahoaka, ny abidy latina no ampiasain’ny fiteny espaniola miampy mari-tsoratra ho an’ny tsindrim-peo tsy manara-pitsipika. Ny mahatokana ny fiteny espaniola dia ireo digrama (renifeo roa mikambana) ch sy ll atao ho litera manokana manaraka ny c sy ny l. Taorian’ny fiovana tamin’ny 2010 ireo litera ireo no tsy atao litera manokana intsony.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_espaniôla&oldid=979902"
Voaova farany tamin'ny 19 Janoary 2020 amin'ny 18:12 ity pejy ity.